आरोहण गुरुकुलमा शुरू भयो बहुभाषिक नाटक उत्सव
काठमाडौँ, १४ असार । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौंको थापागाउँस्थित आरोहण गुरुकुल नाटक घरमा ‘बहुभाषिक नाट्य उत्सब २०७९’ शुरू भएको छ । सो उत्सवको उद्घाटन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा....
साढे २ महिनामा आधा दर्जन फिल्म फ्लप
काठमाडौँ । नेपाली फिल्महरु धमाधाम रिलिज भइरहेका छन् । साउनदेखि कार्तिकसम्मको भरिभराउ छ । लकडाउनका कारण चल्न नपाएका फिल्महरु खुरुखुरु रिलिज भइरहेका छन् । तर केही सिमित फिल्मबाहेक अन्य फिल्महरुमा भने दर्शकले चाख नदिएको...
‘मोडल हन्ट नेपाल’ छान्दै पूर्वमिस नेपाल नम्रता
काठमाडौँ । ‘मोडल हन्ट नेपाल २०२२’ को अडिसन सुरु भएको छ । शनिबारबाट काठमाडौँदेखि प्रतियोगीताको अडिसन सुरु भएको हो । अडिसन ९ जुलाईसम्म चल्ने आयोजक नेक्स्ट मोडल्स नेपालका अध्यक्ष रवि धमलाले जानकारी दिए ।अडिसनमा...
काठमाडौँ, १३ असार । लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या आरोपमा उनका बुबाले सूर्य श्रेष्ठ भनिने खिल बहादुर श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । दिलमायाका बुबा केशर विकले प्रहरी वृत्त बालाजु पुगेर श्रेष्ठविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धि कसुरमा...
काठमाडौं । वरिष्ट लोकदोहोरी गायक अमर विरही गुरुङलाई ‘लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरिने भएको छ । दोस्रो ‘राष्ट्रिय ब्राण्ड म्युजिक अवार्ड २०७८’ मा गुरुङलाई सम्मान दिन लागिएको हो । अवार्ड रास्ट्रिय नाचघर जमलमा आइतबारबार...
लोकगायिका दिलमायाको हत्या भएको खुलासा, सुसाइड नोट नक्कली
काठमाडौँ, १२ असार । लोकगायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको खुलासा भएको छ । सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या भएको भनिए पनि हत्या भएको खुलेको हो । उनको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका उनकै प्रेमी सूर्य श्रेष्ठले...
मृत फेला परेकी गायिका दिलमाया सुनारको कोठा पुगेका व्यक्तिसँग प्रहरीद्वारा केरकार
काठमाडौं, १२ असार। शनिबार मृत फेला परेकी लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको कोठा पुगेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ। शुक्रबार साँझ गायिकाको कोठाका पुगेका ति व्यक्तिको परिचय खुलाइएको छैन। तर सोही...
काठमाडौंमा लोकदोहोरी गायिका दिलमायाको हत्या कि आत्महत्या ? हेर्नुस सुसाइड नोट
काठमाडौँ, ११ असार । लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृत अवस्थामा भेटिएकी छन् । शनिबार विहान काठमाडौँको बानियाटारस्थित डेरामा उनी मृत भेटिएकी हुन् । उनको सामाजिक सञ्जालमा सुसाइड नोट समेत भेटिएको छ । तर, घटनास्थलको...
‘प्रेमगञ्ज’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ, ११ असार । भदौ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘प्रेमगञ्ज’को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ। फिल्मकै शीर्ष गीतको रुपमा रहेको ‘माथि माथि आकाशैमा’ बोल रहेको उक्त गीत शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। गीतलाई...
माण्डवी त्रिपाठीको स्वरमा गजल गीत ‘सराबले नि छुन्न रैछ’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका माण्डवी त्रिपाठीको स्वरमा नेपाली गजल गीत ‘सराबले नि छुन्न रैछ’ सार्वजनिक गरिएको छ । विपिन आचार्यले संगीत भरेको गीतमा प्रवल विष्टको शब्द रचना रहेको छ भने आचार्य स्वयम्को एरेञ्जमा गीत तयार...
मौलिक रत्यौली गीत ‘बुहारी’ सार्वजनिक, यस्तो छ म्युजिक भिडियो
काठमाडौं । गायक अर्जुन पन्त र गायिका सम्झना मगरले नयाँ गीत लिएर स्रोता माझ आएका छन् । गायक पन्तको स्वरमा ‘बुहारी’ बोलको गीतमा गायक अर्जुनको शब्द तथा संगीत रहेको छ । मौलिक लोक लयमा...
यस्तो छ ‘कृष्ण–लीला’ को ‘ए मेरो हजुर…’ (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । चलचित्र ‘कृष्ण–लीला’ को ‘ए मेरो हजुर..’ बोलको नयाँ गीत शुक्रबार सार्वजनीक गरिएको छ । दीपक वली निर्देशीत चलचित्रको गीतमा रवि ओड र सुनीता कार्कीको स्वर,डा. डिआर उपाध्यायको शब्द र बाबुल गिरीको संगीत...
पहिरो खसेर पाल्पा – बुटवल सडक अवरुद्ध
नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै वामदेव